उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयन सूची सार्वजनिक, हेर्नुस् को–को परे छनोटमा? - Everest Dainik - News from Nepal
उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयन सूची सार्वजनिक, हेर्नुस् को–को परे छनोटमा?
काठमाडौं, फागुन १९ । क्रिकेट खेलाडी अवार्डका लागि वर्षको उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयनमा परेका क्रिकेटरको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल खेलाडी संघ र एनसीएसएसनले आइतबार मनोनयनमा परेका क्रिकेटरको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
यस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर टिममा राम्रो छाप बनाएका ५ जना महिला र पुरुष खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरिएको हो । जसमा पुरुष तर्फ दिपेन्द्रसिंह ऐरी, करण केसी, पारस खड्का, सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामी रहेका छन् । यस्तै महिलातर्फ इन्दु बर्मा, करुणा भण्डारी, रुवीना क्षेत्री, सरिता मगर र सिता रानामगर छन् ।
यस्तै वर्षको उदीयमान खेलाडीमा पनि ५ जना खेलाडी मनोनयनमा परेका छन् । मनोनयनमा पर्ने खेलाडीमा अभिनाश बोहरा, कविता कुँवर, ललित नारायण राजवंशी, रोहितकुमार पौडेल र सन्दीप जोरा छन् ।
सिप्यानले आयोजना गर्न लागेको अवार्डमा विभिन्न ५ विधामा उत्कृष्ट खेलाडीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जसमा यसअघि मोमेन्ट अफ दी इयरमा परेका उत्कृष्ट १० खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिएको थयो । यस्तै बाँकी तीन विधाको लागि मनोनयन आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रम मंगलबार हुनेछ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल अमेरिकासँग ५ विकेटले पराजित